Inkcubeko yeNkampani - i-Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
Iinqobo zokuziphatha: Ukwenza ishishini elihle, ukunceda abasebenzi ukuba baphumelele.
Umbono: Kukuba yeyona nkampani ihlonitshwayo ikhethekileyo kwiikhemikhali emhlabeni
Umthunywa: Ukwenza imveliso yamachiza yaseTshayina ibe namandla ngakumbi, isibhakabhaka masibe nombala ococekileyo namanzi
Umoya wethu Okulula, ozinikeleyo kwaye ozivuselelayo.
Imbono yethu: Yonke into kufuneka ihambelane neenqobo zethu eziphambili.
Imigangatho yokusebenza kweqela: Wonke umntu kufuneka abe neenqobo ezifanayo, umbono kunye nenkcubeko, kufuneka abe negunya elinamandla lokuphumeza kwaye onke amacandelo kufuneka asebenze njengeyunithi enye, esenza inkqubela ukuya kwinqanaba elinye.
Ikhowudi yokuZiphatha yeCadre: Ukubamba intliziyo yeqela, intliziyo yenkampani, nentliziyo yomthengi
UMoya weCadre: Akukho ntlungu, akukho sibonelelo
Ukuphunyezwa kweCadre: Izigqibo zenkxaso yenkxaso; ukwenza izigqibo zenkampani ngokukhawuleza
Ukukhetha kweCadre: Ukuma kwakhona, isikhundla esiqeqeshiweyo, iziphumo ezigqwesileyo, khetha ezona zibalaseleyo.
Isithandi sobulumko esiphambili:
Ifilosofi yokusinda: Ukuba sendleleni elungileyo kuphela kwendlela yokuphila ngonaphakade.
Ifilosofi yesimo sengqondo: Yekani ukukhalaza. Bamba ngokukhawuleza. Yenza iingcebiso ubuso ngobuso njengendoda ebambekayo, ungathathi umva njengomntu ongalunganga.
Ukuthobela: Abangaphantsi kwabo bathobela abo bangaphezulu kunabo. Xa inkcubeko yamaqela amancinci kunye nokungqubana kwemidla kungqubana nenkcubeko kunye nomdla kwinkampani, kufuneka bayeke umdla weqela elincinci kwaye bathobele inkcubeko enkulu kunye nomdla wenkampani.
Ukuphunyezwa: Nokuba kulungile okanye akulunganga, phumeza izigqibo zenkampani ngokuzimisela kwayo.
Ukubambisana: Gqibezela izinto ngokunyaniseka njengoko ibiyimisebenzi yakho yobuqu kwaye uthathe lonke uxanduva xa izinto zingahambi kakuhle.
Umsebenzi: Ukuthembeka. Amava abalaseli benkampani anamava agqwesileyo kwaye ayila kwesi siseko.
Idemokhrasi: Vula iingcebiso kunye neengxoxo ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela kwaye wakube ubhaliwe, uyiphumeze ngokungagungqiyo.
Ukunyamezela: Khumbula umbono wenkampani xa udidekile, kwaye uqhubeke usiya phambili, khumbula umbono wenkampani xa umntu eshiya, kwaye uqhubeke usiya phambili. Hlanganisa ujikeleze abaphathi abaphezulu abathathe umongameli njengeyona nto iphambili, kwaye banyamezele de baphumelele.
Inkxaso: Sincedana kwaye sikhule kunye, ukuba umntu omnye uwela emva, bonke abanye baya kumkhuthaza.
Isifundo: Qhubeka nokufunda; Ngaphakathi, funda kubalingane abaphambili benkampani kwaye, sizame ukugqwesa, ngaphandle, ukuba nje abanye banazo izibonelelo, kufuneka sifunde kubo.
Ukukhula: Ezona zinto zinzima ziya kwenza ezomeleleyo. Oku kuyinyani ngokukodwa ngenqindi le-3-5 leminyaka, xa kufuneka silwe kakhulu.
Umzobo: Nikeza umfanekiso oqaqambe kakhulu ongumqeshwa womzi mveliso kwabanye.
Impumelelo: Xa ufumana impumelelo, ungayenzi into eyaneleyo; Xa ungafumani mpumelelo, kholwa ngokuqinileyo ukuba sibalasele njengabanye.
Umvuzo: Zibuze ukuba yintoni le siyenzele inkampani ngaphambi kokuba sithethe ngomvuzo. Ukuzinikezela okuncinci kuthetha ukufumana okuncinci. Ukuzinikezela okukhulu kuthetha ukufumana ngaphezulu.
Ukulunga: qhubela phambili nomoya wokuzinikela.
Umbulelo: Ndiziva ndinombulelo kwi-TY. Zinikele kwi-TY xa silapha, kwaye ungaze ungcatshe i-TY nokuba sele simkile.
Ifilosofi yengqesho: Isikhundla sokuqala kunye nekhono sesibini.
Ifilosofi yokufezekisa: Inkqubo yeyokuqala, iinkokheli zingowesibini.
Umthengi: Dibana nabathengi ngentlonelo; ukunxibelelana nabathengi kakuhle; khonza abathengi ngokuthathela ingqalelo; Ukusasaza uthando kuyo yonke indawo ngexabiso elonyukayo labathengi.
Umboneleli: Sebenzisana ixesha elide, nikhule kunye kwaye nizuze ubudlelwane bokuphumelela.
Kwimozulu: Sebenza nzima, uphile ngolonwabo kwaye ube nosapho olonwabisayo.